AmaXhosa - Inkcubeko yaseMzantsi Afrika
Igama elithi ’Xhosa’ lisetyenziswa jikelele kuma Xhosa kwaye kwingqokelela yeziduko zabo banga ma Nguni, Ama Mpondo, ama Bomvana, aba Thembu, nezizwe zakwa Xhosa. Abantu abathetha ulwimi lwesixhosa okanye ama Nguni ase Kapa athi ahlala kwele Mpuma Koloni, esuka kwela Kwazulu Natal esingisa eMpuma Koloni Zuurveld.
Ngokwemvelaphi babe ngabazingeli, abelusi kwaye belima ngenjongo zokondla iintsapho zabo, babe hlulwe ngokwee nkosi ezinga xhomekekanga kwezopolitiko, nganye ithobela inkosi ephezulu.
AmaXhosa ngokufanayo nama Nguni, ligama lolwimi ngaphezuko buhlanga, yayi lulwimi olwaluthethwa kwindawo zentlanzi, eKeiskamma kunye nakwi Buffalo rivers. Iqela lokuqala labaphambukeli bama Nguni ukufika eMzantsi Afrika phakathi kwalo kwakukho nesizwe sama Xhosa (kuquka uGcaleka, Ngqika, Ndlambe, kunye neziduko zama Dushane), aba Thembu kunye nama Mpondo.
Exesheni kwafika iqela lesibini lama Nguni afika eZululand, kodwa agxothwa ngu kumkani uShaka. Babesaziwa njengama Mfengu, ze azixuba nesizwe sama Xhosa. Ababaphambukeli bokuqala ngabo abathi baqinisa isizwe sakwa Xhosa, yiyonto amaXhosa ilelona qela lesibini linamabantu abaninzi kweli lo Mzantsi Afrika. Kungako nje besisizwe esizithandayo, kuba amaxhosa awazange abengamakho.
Izinyanya kwi Siko lakwa Xhosa
Bonke abantu abadala afayo, abafazi namadoda, babayimi moya ezizinyanya kwaye bangachaphazela ubomi besizukulwana, bethetha nazo ngamaphupho nezilumkiso....more
Umtshato we Siko lesi Xhosa
Umtshato wesintu kwakuvumelekile ukutshata ngaphandle kwesizwe sakuni ngokwesiduko, kwaye leyo yayi yindlela yama Nguni kuphela....more
Uku tshintsha kwe Sizwe sama Xhosa
Ezintlobo zabantu ezisuka kwinkcubeko ezahlukileyo zazinegalelo kwinkcubeko yama Nguni aseKapa, na kulemihla kuselula ukuwabona....more
Uluntu lwama Xhosa ase Mzantsi Afrika
Konke oku kuchaza okokuba ingqikelelo zemfundo ngemfuduko yama Xhosa asuka e-East Africa kwixesha lamandulo azinabungqina, ukuba ayibobuxoki okanye into engapha kwesono....more
Iziduko zama Xhosa kunye no Bukhosi
Isiduko sisetyeniswa ngulowo uyindoda mdala okanye obhinqileyo kwa Xhosa uthi asifumane kutata wakhe isiduko ze ubulungu beqela lesiduko esithile, lubephantsi kweso siduko....more
Amasiko eNkcubeko yakwa Xhosa
Ngokwe mbali, (Imizi) yama Xhosa yayiqelelene kumhlaba okwilali kwaye iphezulu kwamatye neenduli ukuze ingadami amanzi nokuseka umkhosi wokhuselo....more
Amasiko Esintu Abonakalisa uKukhula
Xa abathabatha indawo kaDingiswayo, noTshaka bazisa lendlela kwa Zulu, ulwauko lwama Zulu lwayekiswa....more